မြန်မာ !! လှေသားအချင်းချင်းသတ်ကြပြန်ပြီ – Myanmar Live
မြန်မာ !! လှေသားအချင်းချင်းသတ်ကြပြန်ပြီ
ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ရာ့ချစီထမ်မရာခ်ျခရိုင် ပက်ဖွန်းမြို့နယ်တွင် မြန်မာအချင်းအချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ ဒါးထိုးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်အမှတ် ၃၃/၁၆ (အငှားတိုက်ခန်း) ရှေ့တွင် ပုဆိုးအမည်းရောင် မီးခိုးရောင်စွပ်ကျယ်အင်္ကျီ ၀တ်ဆင်ထားသည့်သူတစ်ယောက် ဓားဒဏ်ရာဖြင့်သေဆုံးနေသည် ဟုအကြောင်းကြားလာသဖြင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ နခွန်ရာ့ချစီထမ်မရာခ်ျခရိုင်ရှိ ငါးဖမ်းလှေတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေသည့် သေဆုံးသူ မောင်ထွန်း အသက် ၃၉ နှစ်ကို ၀ဲနံရိုးကြား ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ၃ ချက် နောက်ကျောတွင်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ၁ ချက် တို့ဖြင့် မှောက်လျက်အနေအထား သေဆုံးနေသည် ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပစ်မှုကျူးလွန်သူ ဇာနည်အောင် အသက် ၄၀ သည် အခင်းဖြစ်ပွားရာ၍အသုံးပြုသည့် ဓားအား နံဘေးရှိချောင်းထဲ စွန့်ပစ်ခါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့သည်။
ကနဦးစစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ ပစ်မှုကျူးလွန်သူ ဇာနီအောင် အသက် ၄၀ နှင့်သေဆုံးသူ မောင်ထွန်း အသက် ၃၉ နှစ်တို့သည် အလုပ်နှင့်နီးသည့် အခင်းဖြစ်ပွားရာ ငှားနေဆောင်၌ အတူငှားရမ်းနေထိုင်ကြပြီး နခွန်ရာ့ချစီထမ်မရာခ်ျခရိုင်ရှိ ငါးဖမ်းလှေတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ကြသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ဇာနီအောင်နှင့် မောင်ထွန်းတို့ ၂ ဦးဟာအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား ထိုးကြိတ်ရာမှ ဇာနီအောင်ဟာ မောင်ထွန်းကို ဓားဖြင့် ၄ ချက်တိတိထိုးသွင်းခဲ့သည်။ မောင်ထွန်းသည်ဓားထိုးခံရစဉ်အသက်လုထွက်ပြေးရာမှ ငှားနေဆောင်ရှေ့ချောင်းနံဘေးတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : 77Kaoded
TaggedcrimeMyanmarMyanmar live newsMyanmarliveထိုင်းသတင်းများ
Previous Article ဆီးဂိမ်းတွင် ကမ္ဘာ့ကြက်တောင်ချန်ပီယံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဟု သက်ထားသူဇာ ပြော
Next Article အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ ၇၂၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် တောင်းဆိုမည်